Abantwana bathanda ukumangalisa abazali babo, njengoko imihla ngemihla bafunda into entsha, bafunde kwaye ngexesha elifanayo babonise iimvakalelo zabo, ezibangela umdla ongenakucatshulwa kumama noodade. Umsebenzi othakazelisayo kakhulu. Ukuphuhliswa kwengqondo yomntwana wexesha lokufunda esikolweni kungumxholo obalulekileyo apho unokuyeka kwaye uthethe ngakumbi. Masiqale ngombono.
Imizwa. Yintoni na?
Ukuba uthetha ngolwimi olungaphelelanga, isimo sangaphakathi, esibonakalisa ubudlelwane phakathi komntu kunye nento yonke eyenzeka kuye, kuthiwa umzwelo. Kukholelwa ukuba ukuziphatha kwabantu kuxhomekeke kwiimvakalelo, zihlala ziqhuba. Ngokomzekelo, ukwesaba nokuxhalabangela kubangela ukuphendula okukhuselekisayo, ukunyamezela kunye nokukhathazeka kubangela abantu ukuba bayeke umsebenzi ongenamdla, baqale ukukhangela umdla okhangayo, oya kubangela ukunyuka kwemizwa kunye nokunciphisa ukukhathala. Kodwa ngaphandle kwempembelelo yangaphandle kwimeko yomzwelo womntu, kukho ingxelo. Sinokuchaphazela abantu abasisondeleyo ngeemvakalelo zethu ezintle, ezingathathi hlangothi okanye ezimbi.
Uphuhliso lwengqondo lomntwana
Sekude kwiintsuku zokuqala zomntwana umntwana ufumana iimvakalelo ezithile kwilizwe elijikelezile, ngokuyinhloko kubazali. Ezi zinto ziqala ukumomotheka, ukuhleka, uvuyo emehlweni abo bazali banokuphucula ukuphuculwa komntwana wabo. Imvakalelo emihle inceda ukukhulisa imemori, intetho kunye nokuhamba. Ekuphenduleni, ufumana ukumomotheka okanye ukukhala kumntwana, uqaphela ukuba, ngoko, umntwana wakho uthetha nawe. Kubaluleke kakhulu ukubonakaliswa kweemvakalelo ezintle malunga nophuhliso oluqhelekileyo lomntwana.
Kuphuhliso olufike ngexesha, akwanele nje ukubonelela iimeko ezifanelekileyo zomzimba - ukunakekelwa okufanelekileyo kwezempilo, ukutya okunempilo, ukulala ngexesha elithile - kubalulekile ukuxhasa umntwana rhoqo xa evukile xa evukile. Ungadlala naye okanye ucokole kuphela. Kodwa ungayikhohlwa malunga neemeko ezixhubileyo kumdlalo - indawo engaphezulu, amathoyizi ngaminyaka, imidlalo yokuphuhlisa.
Uyabona ukuba yonke imihla, ukukhula, umntwana ufumana iimpawu ezintsha kwiindawo zombini kunye neengqondo, kunye nakwiimvakalelo. Ukusebenzisana kwakhe nabanye kuguquka, umntwana uqala ngokubonisa ngokucacileyo iimvakalelo zakhe, ngamanye amaxesha uzama ukuzilawula. Kodwa ungakhohlwa ukuba ukuphuhliswa kwemoya yengqondo engenakwenzeka ngaphandle kokuthatha inxaxheba kwabazali. Namhlanje, ukunxibelelana nabazali kunye noontanga kuqhutyelwa indawo yinkompyutha okanye ithelevishini. Abazali abaninzi abakwazi ukuza kunye neengcamango zokuba kusebenzisane nomoya kunye nabantwana abangakwazi ukucebisa umgangatho wabo weemvakalelo kwaye baphumelele ekuphuculeni phambili komntwana. Abazali baxakeke kakhulu okanye "bekunye", kodwa ke akuyi kuba nako ukulinda umntwana wabo ukuba abe novelwano kunye nokunyamekela iimvakalelo zabanye.
Ziziphi iimpawu ezibandakanya ukuphuhliswa ngokomzwelo kwezingane zasesikolweni?
Ngaba uyazi ukuba umntwana omncinane usabela kwihlabathi kwimeko echaphazelayo? Masiqale siqonde inkcazelo yeli gama. Ingxaki (ukusuka kwisiLatini, umnwabo), ubizwa ngokuba ngumdla wentsholongwane yengqondo, ukukhula ngokukhawuleza nangokukhawuleza, okuhamba kunye namava amaninzi, ngokukodwa ukubonakaliswa kwangaphandle okubonakalayo, ukunciphisa ukuzithiba kunye nokunciphisa ukuqonda. Ukuchaphazela kunzima kakhulu ukunqanda, kuba kubonakaliswa ngokumelene nentando yomntu, kwaye akunakwenzeka ukuyilawula, ngokungafani neemvakalelo.
Into kukuba ukubonakalisa ukuziphatha ngokomzwelo kumntwana akungazi, njengoko kwenzeka kubantu abadala. Umntwana uphendukela kuyo yonke into eyenzeka ngeenxa zonke, ngokwasemoyeni. Kule meko, ukuhleka ngokukhawuleza, ukutshintsha ngokukhawuleza ekulileni, akufanele kukumangalise - iimvakalelo ziyakwazi ukukhawuleza kwaye zikhawuleze zibuyele. Lo mbandela wophuhliso lwengqondo kubantwana. Ngoko ke, akakwazi, umzekelo, ukufihla imizwa yakhe, akafundile ukulawula. Zonke iimvakalelo zomntwana wakho - njengentendelezo yesandla sakho! Abantu abadala bahlala bekumangaliswa ngokungazenzisi abantwana, ukunyaniseka kwabo. Kodwa ngebanga leminyaka emine okanye emihlanu, abantwana bangabonakali nje iimvakalelo ezintle, ngezikhathi ezithile babonisa ukucasula, umsindo kunye nokunganeliseki. Kodwa le yinguqu echanekileyo kwimvakalelo yengqondo, kuba ibonakalisa izenzo ezithile ezinokwenza okuthile. Ngoko ke ukuba umntwana uyaguquka ngokukhawuleza - khangela isizathu.
Kwenzeka ukuba abazali bazama kanzima ukuba "bagxininise" isimo sengqondo esihle somntwana kuyo yonke into eyenzekayo kwaye ungavumeli iimvakalelo ezingekho phantsi. Esikhundleni sokukhangela isizathu sokwenza utshintsho kwimeko-ukubonakalisa ukucaphukisa okanye ngesantya, abanye abazali banokumangalisa umntwana wabo. Kodwa ke umntu omdala uba ngumntwana ongenangqiqo, xa isimo sakhe sengqondo kumntwana sivela ngokukhawuleza, kuxhomekeka kwimoya yabantu abadala. Iimvakalelo ezibonakaliswe ngabazali kwiimeko ezinjalo kufuneka zibe yindlela kuphela yokukhuliswa kwengane, xa kuyimfuneko ukuba ingqalelo kwiifom ezikhethiweyo zempembelelo yomzwelo.
Ihlabathi elizungezile liqondwa ngumntwana ngokusebenzisa iifom ezicacileyo kunye nemifanekiso ekhanyayo, iimpawu zezinto ezikufutshane. Ukuba abantu babonakala beqonda yonke into kunye neyesiqhelo, ezinye iipropati kunye neziganeko zivelisa umfanekiso ocacileyo kwilizwe lomntwana. Ngaba kukho indlela efanelekileyo yokuphatha ukukhula komzwelo komntwana? Ewe, kukho. Yaye le ndlela-umdlalo. Kodwa esi sihloko sele sisicatshulwa.
Ubundlobongela kwabantwana - umlingiswa okanye imfundo
Yintoni enokuyenza ngemidwebo yabantwana?
Ngakanani kwaye kukuphi ixesha ukuqala ukufundela umntwana ebhodweni
Indlela yokuziphatha kwiklasi elitsha?
Ingxaki yonyaka wokuqala wobomi
Indlela yokufakela uthando lokufunda umntwana
Kutheni iminwe itywina?
Izifo ezivakalayo kunye nokuphendula kwabantu
Ukuzibonakalisa intamo ende ende
Imibongo yeKrisimesi 2017 kubantwana - Iifutshane ze-Orthodox zezingane malunga neKrisimesi ngesiRashiya
Uqhagamshelwano lenses, njani ukhetha?
Iindlela zokulungiselela ukhilimu ngeoli ecocekileyo
Ukuxhatshazwa - yintoni na?
Ukuhlobisa ngesitayela seProvence
Biography kaGerard Depardieu
I-Horoscope yeSagittarius-abafazi ngoDisemba 2016
Ukuqala ngesondo nomntu omtsha
Isilinganiselo semibandela yokulala kombhede
Ukukhulisa iintandane kwiinkedama
I-acid ye-folic yabasetyhini
I-Media Media: I-Buzov iphumelela kwi-Roman Abramovich